Inona ny atao hoe Makefile ary ahoana no fiasa ao anatin'ny Linux? | Avy amin'ny Linux
Inona ny atao hoe Makefile ary ahoana no fiasa ao anatin'ny Linux?
Si te-hihazakazaka na hanavao asa raha havaozina ny rakitra sasany, ny make utility dia mety ho tonga mora ampiasaina. Ny utilite make dia mitaky rakitra, makefile, izay mamaritra ny andiana lahasa tokony hovonoina.
Ity anarana ity dia toa mahazatra anao amin'ny maro satria mety efa nampiasainao ianao hanangonana programa iray avy amin'ny kaody loharano. Ny ankamaroan'ny tetikasa loharano misokatra dia mampiasa manamboatra tahiry farany azo tanterahina, izay azo apetraka amin'ny alàlan'ny make install.
Ity indray mitoraka ity ho takatsika ny fomba fiasan'ity karazana fisie ity ao anatin'ny Linux.
Fisie Izy io dia miavaka amin'ny karazana fanambarana efatra:
Ny Fitsipika mazava dia milaza hoe iza no antontan-taratasy miankina amin'ny rakitra hafa, ary koa ny baiko takiana amin'ny fanangonana rakitra manokana.
Na dia misy aza ny implicité dia mitovy amin'ireo explicit, fa amin'ny fahasamihafana dia asehon'izy ireo ny baiko hanatanterahana azy, fa kosa mampiasa ny extensions fisie mba hamaritana izay baiko tokony hatao.
Amin'ity ohatra ity dia tsy hampiasa ireto roa farany ireto isika, Hanomboka amin'ny fanontana ny mahazatra "Hello World" ao amin'ny terminal ihany isika.
Ho an'ity dia hamorona lahatahiry poakaty miaraka amin'ny anarana tadiavinao ianao.
Amin'ity tranga ity ndao atao hoe "ohatra-manao" ary ao anatin'izany hamorona makefile miaraka amin'ireto atiny manaraka ireto izahay:
ankehitriny ampandehano ny fisie amin'ny alàlan'ny fanoratanao an-tsokosoko ao anaty lahatahiry, ny output dia:
Araka ny hitanao rehefa novonoina ny makefile dia naseho ny kaomandin'ny "Hello World", arahin'ny fivoahan'ny baiko tena izy. Matetika isika tsy mila an'izany. Mba hamehezana an'ity vokatra ity rehefa mihazakazaka ianao dia manampia "@" alohan'ny akony:
Ny ohatra azo ampiharina amin'izany dia:
ankehitriny afaka manohy mihazakazaka ny makefile indray isika. Ity vokatra ity dia tokony haseho:
Tena fototr'asa ity. Fa araka ny fantatrao, ny forfile dia misy zavatra marobe, izay manondro ny filaharana manaraka.
Azontsika atao ny manampy ny filaharana tsotra amin'ity rakitra ity.
Inona hataontsika dia ny manitsy ny rakitra toy izao:
Rehefa mamerina mamorona ny makefile, io ihany no hanatanterahana ny tanjona voalohany. Izany dia satria ny tanjona voalohany amin'ny makefile ihany no tanjona kinendry.
Mihazakazaka milahatra ilaina ny manondro azy ao anaty rakitra miaraka amin'ny "rehetra". Andraikitry ny "any" ny miantso lasibatra hafa.
Azonao atao ny manohy mamorona make indray ary ho hitanao fa ao anaty lahatahiry misy rakitra antsoina hoe "File.txt".
Toy izany koa azo atao ny afaka manatanteraka tanjona kendrena ao anaty rakitra makefile, io dia matetika ampiasaina be.
Hanova ny fisie anay izahay ary hanampy ity manaraka ity amin'ny farany:
Afaka mihazakazaka manao make indray ianao ary hamerina hamerina ilay rakitra txt. Araka ny ho hitanao dia hanao zavatra mitovy amin'ny taloha ihany izy io. Fa izao kosa dia hanatanteraka ny lasibatra izay ao anatin'ny rakitra makefile isika.
Amin'izany isika dia afaka mianatra zavatra tena ilaina momba ny fanaovana rakitra ary ny fomba mety hahasoa azy ireo raha te hampandeha automatique zavatra sasany isika.
Mazava ho azy fa afaka manangana rakitra lehibe kokoa sy sarotra kokoa ianao, saingy ohatra iray fotsiny ho an'ireo vao manomboka (ampidiriko ny tenako) izay mahalala ny fomba fiasan'ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » Inona ny atao hoe Makefile ary ahoana no fiasa ao anatin'ny Linux?
Lahatsoratra tena mahaliana. Fanontaniana ... izay antsoinao hoe "miovaova" dia tsy fiasa na fomba?
Raha ny marina, eny namako, misaotra tamin'ny fanitsiana.
Tsara, antenaiko fa mihady foana ianareo.
ManuelALcocer dia hoy izy:
Eny, na ny zavatra iray na ny iray hafa, https://www.gnu.org/software/make/manual/make.html, dia "lasibatra"
Valiny tamin'i ManuelALcocer
Manantena aho fa manohy manazava zavatra toa an'io, "manerana an'izao tontolo izao sy ambaratonga voalohany", momba ny fihazakazahana isan'andro an'ny Linux, izay tsy misy manazava amin'ny hafanam-po mitovy amin'ny fomba nitoriana ireo "tombony sy fiasa" ireo.
OpenSUSE Tumbleweed izao dia mampiasa Linux Kernel 4.18, manampy ny fanohanana AV1
Red Hat Enterprise Linux 7.6 Beta manafaka izao